Fitsaboana - Shijiazhuang Yiling Hospital
Ny fitambaran'ny nentim-paharazana sinoa sy ny tandrefana dia feno fanafody fitsaboana. Izany dia ny manambatra ny nentin-drazana Shinoa fitsaboana amin'ny fanafody andrefana, ary haka lasibatra fitsaboana araka ny lalàm-panorenana ara-batana ny olona samy hafa. Indrindra ao anatin'izany ny: fitsaboana nentim-paharazana sinoa sy ny tandrefana fanafody fahazarana fanadinana, nentim-paharazana sy ny fitsaboana tandrefana Shinoa mba hampahahendry fanafody fitsaboana, TCM decoction, am-bava fanafody fitsaboana, fitsaboana ara-batana, fitsaboana hafa, toy ny fikarakarana manokana toy ny lafin'ny sela fitsaboana, etc.
Nentim-paharazana sinoa fanafody fitsaboana dia ahitana:
1) Shinoa nentin-drazana fanafody fitsaboana, toy ny tsindrona volamena, moxibustion, fanorana, cupping, fikikisana sy ny sisa.
2) ny toetra mampiavaka ny Shinoa fanafody:-singa dimy fitsaboana fandroana, singa dimy mozika fitsaboana, toetra mampiavaka ny moxibustion;
3) TCM Athletic fanarenana: fanatanjahan-tena ny nentim-paharazana, toy ny Tai Chi / haiady, miaraka ny fivoaran'ny aretina maoderina, hampivelatra ny vaovao ara-panatanjahantena ho an'ny aretina fitsaboana sahaza fanarenana, mampirisika ny fahatsapana ara-batana sy hanatsarana ny vokatry ny fitsaboana.
4) Shinoa sakafo fitsaboana: sakafo no ampahany manan-danja indrindra eo amin'ny fiainana. Ny sakafo ara-dalàna no tena zava-dehibe ho amin'ny fanarenana ny tena.
5) ny fanabeazana ara-pahasalamana; Ary rehefa afaka ny fitsaboana, ny fomba tsara foana sitrana fanjakana, ny manam-pahaizana no hanatanteraka ny fampianarana fanarenana ara-pahasalamana isan'andro.
Fa ny fitsaboana ny homamiadana, hozatra atrophy, maotera neuron aretina, rheumatism, aretin-kozatra, scleroderma, aretin'ny voa, aretin'ny voa, diabeta, sy ny sisa, inona no karazana fitsaboana no ampiasaina, inona no karazana fitsaboana vokatra andrasana, azafady hametraka hafatra na hijery manam-pahaizana manokana.